स्ट्रबेरीले पायो उत्पादन र बजार - झुल्केघाम
स्ट्रबेरीले पायो उत्पादन र बजार
March 21, 2020 7:44 PM
राजगढ । झापाको बाह्रदशीमा लगाइएको स्ट्रबेरीले उत्पादनसँगै राम्रो बजार पनि पाएको छ । यहाँ दैनिक एकदेखि डेढ टन स्ट्रबेरी उत्पादन हुने गरेको समर्पण एग्रो प्रालिले जनाएको छ । ‘बजारको मागअनुसार स्ट्रबेरी टिप्ने गरेका छौं’ प्रालिका ब्यबस्थापक विवेक शुक्लाले भने ,‘त्यही भएर उत्पादनको दर एउटै छैन ।’ उनले सरदर एकदेखि डेढ टनसम्म दैनिक उत्पादन भएर खपत हुने गरेको बताए । हालसम्म ९०१ टन स्ट्रबेरी उत्पादन भएको शुक्लाले जानकारी दिए ।
गत १६ डिसेम्बरमा स्ट्रबेरीमा पहिलो फल लागेको थियो । त्यसपछि २५ डिसेम्बरमा स्ट्रबेरीले २५० ग्राम उत्पादन दिएको थियो । हिउँद मौसम र चिसो हावापानीमा फल्ने स्ट्रबेरीको सिजन अब सकिन लागेको हो । अहिले अन्तिम सिजन चलिरहेको शुक्लाले बताए । ‘अब यसको उत्पादन १५ अप्रिलसम्म मात्र चल्छ ’उनले भने ,‘मौसमले साथ दिएको खण्डमा मार्चसम्म फल्न सक्छ ।’ केही दिनअघिको वर्षाले स्ट्रबेरीलाई असर पुर्याएको उनले बताए ।
पहाडमा फल्ने फलले तराईमा राम्रो उत्पादन दिन नसक्ने आशंकाका बीच गोल्यान एग्रो प्रालिले बाह्रदशीमा पहिलोपटक लगाएको स्ट्रबेरीले राम्रो उत्पादन दिएको हो । उत्पादनसँगै यसले राम्रो बजार पनि पाएको छ । नयाँ फल स्ट्रबेरी हेर्न र किन्न जानेको भीड लाग्ने गरेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानसँगै अमेरिका, जापान, कोरिया र अष्ट्रेलियाबाट समेत स्ट्रबेरी हेर्न आएको ब्यबस्थापक शुक्लाले जानकारी दिए ।
फार्मबाटै दैनिक ३५–४० केजी स्ट्रबेरी बिक्री हुने गरेको छ । मंगलबार ‘ए’ ग्रेडको ९.५ केजी र ‘ई ’ ग्रेडको २१ केजी स्ट्रबेरी फार्मबाटै बिक्री भएको कर्मचारी राजेन्द्र भट्टले बताए । त्यहाँ दुई ग्रेडको स्ट्रबेरी निकालिएको छ । यहाँ उत्पादित स्ट्रबेरीको बिर्तामोड, दमक, विराटनगर , धरान र काठमाडौंमा राम्रो माग रहेको छ । बिर्तामोडमा दैनिक एक क्वीन्टल स्ट्रबेरी आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्योसँगै दुबई पनि पठाइएको थियो । दुबईमा यहाँको साम्पल टेष्ट गर्दा पूर्ण अर्गानिक पाइएको शुक्लाले बताए । त्यसपछि दुबईबाट दैनिक ७ टन स्ट्रबेरीको माग आएकोमा त्यसबमोजिम आपूर्ति गर्न नसक्ने भन्दै यस वर्ष नपठाएको उनले जानकारी दिए ।
अर्को वर्षदेखि दुबई र ओमानमा स्ट्रबेरी निर्यात गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । स्ट्रबेरी ‘ए’ ग्रेड एक हजार र ‘ई’ गे्रड ५ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री हुने गरेको छ । होलीको अवसर पारेर ‘ए’ ग्रेडलाई ८ सय र ‘ई’ ग्रेडलाई ४ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी झारिएको छ । फार्मबाट टिपेर मजदुरहरुले त्यहीँ २ सय ५० ग्रामको दरले प्याकेजिङ गर्ने गरेका छन् । टिपेका स्ट्रबेरी बिग्रिन नदिन कम्पनीले फार्ममै कोल्डस्टोर बनाएको छ ।
गोल्यानग्रुपको समर्पण एग्रो प्रालिले बाह्रदशी -१ को जनता बजारदेखि पश्चिम ३८.५ एकड (करिब ३२ बिगाह) जग्गामा स्ट्रबेरी लगाएको हो । खेतीका लागि शुरु-शुरुमा सय जना कामदार खटिन्थे भने अहिले ६० जनाले दैनिक ज्यालादारी गरिरहेका छन् । महिलालाई पाँच सय र पुरुषलाई ६ सय रुपैयाँको दरले स्थानीयहरुलाई नै रोजगारीमा लगाएको कम्पनीले जनाएको छ  । जसबाट स्थानीय आदिवासी, दलित र मुस्लिम समुदायमा बेरोजगारको समस्या केही हदसम्म हल भएको छ ।
नजिकै घर भएकी सविना राजवंशी ५ महिनादेखि मजदुरी गरिरहेकी छन् । ५ सय रुपैयाँ हाजिराको दरले उनले हप्तामा ३५ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । तीन छोरीकी आमा सविनाको परिवारलाई मिस्त्री काम गर्ने श्रीमानको एक्लो कमाइले गुजारा गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । ‘पहिला घरब्यबहार चलाउन समस्या थियो’उनले भनिन्,‘अब त मैले पनि सहयोग गर्ने गरेकी छु ।’
स्ट्रबेरी फार्मले सविनासँगै न्यून आय भएका यशोदा माझी र दिपिका टुडूलाई पनि काम गरेर गुजारा गर्न मद्धत पुगेको छ । त्यहाँ राजवंशी , माझी, सन्थाल र मुस्लिम समुदायका महिला र पुरुषहरुले बढी रोजगारी पाएका छन् । बाह्रदशी १ मा व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती गरेको गोल्यान ग्रुपले घेराबारीमा पनि खेती विस्तार गर्न लागेको छ ।
त्यहाँ १ हजार विगाहामा व्यावसायिक रुपमा फलफूल र तरकारी खेती गर्न लागेको जनाएको छ । फलफूल र तरकारीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै यहाँ उत्पादित सामान विदेश निर्यात गर्ने योजना रहेको गोल्यान ग्रुपका सञ्चालक पवन गोल्यानले बताए । बाह्रदशी १ मै पनि कम्पनीले स्ट्रबेरीसँगै मकै, काँक्रा र खरबुजाको खेती थालेको छ ।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
नागरिकताबाट पतिको नाम हटाउने प्रस्ताव
आज ६ वटा उडानमार्फत नेपालीहरु स्वदेश फर्कंदै
शोकमा डुबेकी आमालाई साथ दिदै रिद्धिमा , छोरा रणबीर आलियासँग व्यस्त
केपी ओलीको जस्तै कुर्सि मलाई पनि चाहियो: माधव कुमार नेपाल
हिमालयन एयरलाइन्सद्वारा उद्वारको तालिका सार्वजनिक
मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा आमा-छोराको मृत्यु
७ सय गोल गर्ने सात फुटबलर
आज झापाका २१ जनामा कोरोना संक्रमित,अरू जिल्लाका कति ?(विवरणसहित)
मुटु परीक्षणको लागि प्रधानमन्‍त्री ओली गंगालाल अस्पतालमा
नेपालमा थप ४ सय ८२ जनामा कोरोना संक्रमण,आजमात्रै १४ सय ६२ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
नयाँ नक्सा निशान छापमा समेटिएकोमा स्वागत
चारपानेमा जलेको अवस्थामा पुरुषको शव फेला ,मृतकको परिचय खुल्न बाँकी
आरडिटी परीक्षणमा हल्दिबारीका एक युवकमा कोरोना पोजिटिभ भेटियो
मृतक सुत्केरीको कोरोनाबाटै मृत्यु भएको पुष्टि
बाँकेको क्वारेन्टिनमा रहेका युवकको कोरोना कै कारण मृत्यु भएको आशंका
दिगो विकास बहुउद्देश्य प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित अनलाइन न्युज पोर्टल ।
पदम बहादुर तामाङ (देवराज)
झुल्केघाम डट कम
विर्तामोड न.पा. वडा नं. ४
पुरानो भद्रपुर रोड, झापा
Mobile : 9852675344, 9852655924
सूचना विभाग दर्ता नं.: १३१८/०७५-७६
Copyright @ Jhulkegham.com 2016-2020 | Designed By : M.S Design Studio.